Irreecha Baranaa:Har’a qophii ayyaana Irreechaa bara kanaa ilaaluuf – Kichuu
HomeNewsAfricaIrreecha Baranaa:Har’a qophii ayyaana Irreechaa bara kanaa ilaaluuf
Irreecha Baranaa:Har’a qophii ayyaana Irreechaa bara kanaa ilaaluuf
Fulbaana 18/2010 Irreecha Baranaa:Har’a qophii ayyaana Irreechaa bara kanaa ilaaluuf Bishoofuu Hora Arsadiin oole.
Naannoon malkaa Irreeffannaa karaa adda ta’een bal’atee qulqullaa’ee Oromoota simachuuf qophaa’ee jira. Karaan seensaa fi bahaa babal’aa ta’e adda addatti miidhagee qophaa’ee jira. Daggalli naannoo malkaa jiru sirriitti qulqullaa’ee jira. Abbootin Gadaa Malakaatti korma qalanii Ayyaanni Irrecha baranaa ayyaana araaraa fi nagaa akkaa ta’u waaqa kadhataa jiru.
Guyyaa har’a kana Abbaan Gadaa Tuulamaa fi Dura Taa’aan Gumii Abbootii Gadaa Oromoo Obbo Bayyanaa Sambatoo akka natti himanitti, Ayyaanni Irrecha baranaa kallatti Gumii Abbootii Gadaa Oromoo kaa’an qofaan kabajama. Ayyaanicha kan qindeessuu fi kan hogganus Gumii Abbootii Gadaa Orommoti . Haaluma Kanaan, Fulbaana 21/2010 Ganama irraa kaasee gara malkaatti akka deemamu, sagantaan jirus baay’ee gabaabaa akka ta’e naaf ibsanii jiru. Erga namni hundi malkaa gahee booda, Abbaan malkaa eebba taasisu. Itti aansuun Abbaa Gadaatu eebbisa. Kana booda Irreffannnaatu itti fufa. Namni erga Irreeffatee booda Waaqa isaa galateeffachaa gara dhufetti deebi’a. Akka Abbaa Gadaa Bayyanaan jedhanitii barana bakka Irreechaatti haasaan taasifamu hinjiru.
Nageenya ilaalchise akka aadaa Oromoo fi sirna gadaatti foolleetu nageenya eega. Foollee fi Poolisiin Oromiyaa waliin qindaa’anii nageenya hirmaattotaa eegu.
Ayyaana Irreechaa baranaa irrattii lammilee keenya Naannoo Somaalee irraa qe’ee fi qabeenya isaaniirraa buqqa’an deebisanii dhaabuuf deggersa walitti qabuuf Koreen abbootii gadaa, bulchiinsa Magaalaa Bishooftuu irraa waliti ijaaramee jira. Iddoo deggersi itti walitti qabamu Kaazinaa Samsame saddeet Baankii Waldaa Gamtaa Oromiyaa waliin ta’uun akka qopheessan hubannee jirra. Kanaafuu hirmaatotni ayyaana Irrechaa baranaa hanga human keessanii akka deggersa gootan haalli mijaa’ee jira.
Gadaan Gadaa Tokkummaati!
Addisu Arega Kitessatiin.
[OBN 18 01 2010] Abbaa Gadaa Tulaamaa fi Walitti qaba Gumii Abbooti Gadaa Bayyaanaa Sanbaatoo Irreechi Mallattoo Oromummaa wanta ta’eef haala miidhagaa ta’een kabajuun addunyaatti Oromoo ittiin beeksisu qabna jedhan turti OBN waliin taasisaaniin.
Dr.Tsegaye Ararssa RDH -Hag-29-2017 Dhumaatiin Irreecha Bara Darbee Irratti Ilmaan Oromoo Irratti
MESERET NUGUSE: YA WAN OFI NEW OROMO MUSIC 2017
shemelis wesin says:
Aadaa kabajuu fi kunuunsuun mallattoo qaroominatti.